Weriyeyaasha Mogadishu oo cadeeyay sababaha ay shaqada u joojiyeen
Monday July 05, 2010 - 05:15:28 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Weriye Cilmi Cismaan Faarax Boodhari oo ka mida Weriyeyaasha ugu magaca dheer Somalia ee dhawaan shaaciyay inay shaqada isaga tageen ayaa markii ugu horeeysay si cad uga hadlay sababaha ay shaqadooda gacmaha uga laabteen.
" Waxaan rabno sheeg hadii kale waxaad tahay Rido,gaal waana lagu dilaa ayaan shaqadii uga tagnay maxaa yeelay inaan noqono Microphone ama cod baahiye la adeegsado naga suurtagal maaha"ayuu yiri Cilmi Boodhari.
Boodhari oo hadalkiisa ku beegay maalin kadib markii ay shaqada isaga tageen 14 Weriye oo uu ka mid yahay wuxuu dhinaca kale tilmaamay inay Somalia noqotay Jamhuuriyadda cabsida.
Weriye Cilmi Boodhari oo shaqada ka bilaabay idaacadii Codka Shacabka ee Ex Radio Mogadishu,waa Suxufi hal abuurkiisa aad loo jecel yahay,waxaana lagu tiriyaa Weriyeyaasha ugu faalo diyaarinta wanaagsan dalka Somalia.
Weriyeyaasha Somalia soo maray ee warbixinadooda loo riyaaqo waxaa laga xusi karaa,Ali Muusse Abdi,Hassan Bariise,Cawil Dahir Salaad,Cilmi Cismaan Farax Boodhari,Mohamed Ibrahim Macalimuu ka mida Weriyeyaasha dhawaan soo shaac baxay iyo Weriye Cabdi Casiis Maxamud Guuleed Africa oo dhinaca xeerinta iyo tayeeynta wararka hogaanka koowaad ku galay sanadkii la soo dhaafay Somalia.
Ali Musse Abdi waxaa uu noqday Weriyahii ugu riskiga badnaa Somalia,waxaana dhacday in Maamulkii Jeneral Mohamed Farah Aideed qabteen,oo xukun dila ku rideen balse uu nasiib wanaag ka badbaaday ka gadaal markii uu habeen saqdhexe ka baxsaday Xaruntii C.I.D oo uu ku xirnaa.
Ali Waxaa uu Mogadishu kala kulmay tacadiyo taariikhda galay,waxaana ka mid ahayd in Warbixin uu qoray uu ka carooday hogaamiyahii Maxaakiimta ee Waqooyiga Mogadishu kadibna gacan gooyn lagu xakumay.
Waxaa dhacday in gurigii uu deganaa bambooyin lagu weeraray,waxayna ugu dambeyntii dhaxalsiisay inuu isaga soo huleelo,oo Nairobi ka dhigto Fariisin.
Ali Musse Abdi ,inkastoo iminka uu joogo waqti uu heer wanaagsan ka gaaray fanka hadana waxaa colaadintiisa ugu badan la rumeeysan yahay inay ku tiirsaneed quuri weeyto loo quuri waayay hab dhigaalkiisa waana sababta Weriyeyaashii ay soo wada shaqeeyeen oo uu ka mid yahay Qaasim Nero u yiri" Ali Musse oo Rikoor wax ku duubayo ama Note ka sameeynayo shir Jaraa'id weligeey ma arag,waxaanse uun arkayay isagoo khudbada la jeediyo maskaxdiisa kaga sheekeeyn karo mar kale"
Mogadishu Times iyo Weriyeyaal kontomeeyo ka badan ayuu abuuray Ali Musse kuwaas oo ka mida Suxufiyiinta ugu caansan Somalia Maanta.waxaana dulucda warkeena dambe ugu qaadaa dhignay inuu ahaa Weriyahii ugu horeeyay ee diiday,waxaan rabno sheeg.